UkuSondelana, Iqiniso kanye NokuXhumana
1.‎1 FUNDA: UkuSondelana, Iqiniso kanye NokuXhumana
2.‎1 FUNDA: I-ARC Triangle
Ungayisebenzisa Kanjani i-ARC Triangle
3.‎1 FUNDA: Ungayisebenzisa Kanjani i-ARC Triangle
4.‎4 Ukwandisa i-ARC ngokuXhumana
true understanding /zu-ZA/tools-for-life/understanding/steps/affinity-reality-and-communication.html read 1 4 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/understanding_zu_ZA.jpg Izingxenye zokuQonda
Uyemukelwa kwi-Online Course Yezingxenye zokuQonda
Empilweni yethu yonke, siphokophela ukuqonda abantu kangcono, ukuze uhlangane kangcono nabanye, ukwazi ukusebenzisa kangcono umshini noma ukumane wazi ukuthi kwenzekani emhlabeni.
Kepha naphezu kwezinhloso zethu ezinhle, kwesinye isikhathi sihlangabezana nokudumala, imibono eyehlukile nokungaqondi.
Ukube bekunenye indlela yokukhulisa ukuqonda kwethu abantu nezinkinga, lokho kungaba yinto ebaluleke kakhulu ukuyazi.
Kwi-Scientology, kwatholakala ukuthi bonke ubudlelwano babantu—futhi eqinisweni, noma yimuphi umsebenzi empilweni—ungathuthukiswa uma usuyazi ukuthi yini ukuqonda okungokwangempela uqobo.
U-L. Ron Hubbard uhlukanise izingxenye zangempela zokuqonda. Ngokwazi lezi zingxenye nokuthi zihlobana kanjani nokuthi zenezela kanjani ekuqondeni, ungenza okuthile nganoma iyiphi inkinga, enkulu noma encane.
Lolu ulwazi oluyisisekelo, olujwayelekile kuzo zonke izici zokuphila, kusuka ebudlelwaneni nabanye abantu, ekuqhubeni izinkampani, kokuba ngamalunga eqembu, ekufundeni nemfundo, uhulumeni, imboni—konke lokhu.
Lesifundo sikunikeza isingeniso kulezi eziyisisekelo ezilula kodwa ezinamandla ukuze uqale ukuletha ukuqonda okuthe xaxa kunoma iyiphi indawo yempilo yakho noma izimpilo zabanye.
Kwi-Scientology, sinokuningi okufanele sikwenze ngale ndaba ebizwa ngokuthi ukuqonda. Ukuqonda kuqukethe izingxenye ezithile. Lezi zingxenye yilezi: UKUSONDELANA, IQINISO kanye NOKUXHUMANA.
Ukuqonda umphumela kusuka ekuhlanganiseni ukusondelana, iqiniso kanye nokuxhumana. Isibonelo, umuntu kufanele abe nokusondelana okuthile (ukuthanda into), ukuxhumana okuthile nayo kanye nomqondo othile wangempela (azi okuthile ngakho) ngaphambi kokuba akuqonde. Ngakho-ke ikhono lakhe lokuqonda noma imuphi umuntu, umcabango noma into kuncike ekusondelaneni, ukuxhumana kanye neqiniso lakhe.
Ukwazi ukwenza ngcono noma ukukhulisa ukuqonda, kuyadingeka ukuthi ujwayele ngokugcwele futhi uqonde ukuthi ingxenye ngayinye yalezi zingxenye ezintathu iquketheni ngayinye.
Igama elithi ukusondelana lisetshenziswa lapha ukuchaza uthando, ukuthanda noma esinye isimo sengqondo. Ngaphansi kokuthi “ukusondelana” sinakho ukuthi siyabathanda noma asibathandi abantu, noma singakwazi noma angeke sikwazi ukuhlala eduze nabantu, noma sizizwa sinemizwa phambi kwabantu. Imizwa ehlukene efana nokunganaki, intukuthelo, isizungu, umndlandla ngakunye kukhombisa amazinga ahlukile okusondelana.
Izinga lokusondelana lingalinganiswa ngokuthi umuntu uzimisele kangakanani ukuba sendaweni efanayo noma afane (afane) nomunye umuntu. Uma uthi, “Ngiyakuthanda,” uthi, “Kulungile, ngizoba njengawe maduze nje.” “Ngiyakuthanda” kuzosho nokuthi, “Ngizovele ngithathe isikhala sakho masisha.” Lapho abantu ababili bengathandani, kusho ukuthi ngeke babe sesikhaleni somunye nomunye, ngeke bathande ukuthatha umbono womunye umuntu. Abafuni ukufana nomunye umuntu. Uma omunye egqoke okwesibhakabhaka, omunye uzizwa sengathi kufanele agqoke okuluhlaza. Uma engabe amadoda amabili ekhuluma nomunye kungekho ukusondelana, omunye nomunye bazohlala bephikisana noma avele nje ahambele kude omunye komunye.
Ngeqiniso sisho “izinto eziqinile, izinto zangempela zokuphila.” Iqiniso yilokho okuqondwayo (okubonwayo, yilokho okuzwayo, njll.). Iqiniso yisivumelwano sokuthi yini noma ekhona yini ekhona. Into eyiqiniso yinto esivumayo ukuthi ikhona futhi singayibona. Okuphikisanayo kungaba ukungqubuzana, lapho abantu ababili noma ngaphezulu bengavumelani ngalokho okuyiqiniso noma okuyikho ngokoqobo qobo.
Lokho okuyiqiniso kuyiqiniso ngoba kuvunyelwene ngakho futhi ngaphandle kwesizathu.
Ukuxhumana ikhona okubaluleke kakhulu kulezi zingxenye ezintathu ukuletha ukuqonda.
Ukuxhumana kungumlayezo noma kuyizinhlayiyana, kuhamba ibanga kuyisiqondiso esithile phakathi kwamaphuzu afana ncamashi amabili.
Indlela elula kakhulu yokusho ukuthi ukuxhumana kusho ukuthi ukushintsha (noma ukunyakaza) kwesanhlayiya ukusuka kwenye ingxenye yesikhala kuya kwenye ingxenye yesikhala. Inhlayiya yinto edluliswayo ekuxhumaneni. Kungaba yinto, umyalezo obhaliwe phansi, igama elikhulunywayo noma umbono.
Isibonelo, uma uthathe i-baseball wayiphonsa kothile ukuthi ayibambe, lokho yikhona ukuxhumana kusukela kuwe kuya komunye umuntu. Uma engabe uthe “sawubona” kothile, lokho nakho kungaba ukuxhumana, ngokulandela ncamashi okushiwo ngenhla.
Ukuxhumana nakho kungaba ngezindlela ezimbili, nomuntu okunguyena owamukele umyalezo wokuqala ethumela owakhe umlayezo emuva kumuntu wokuqala. Lokhu kudala ukushintshana (ukupha nokwamukela noma ukushintshana) kwemibono noma izinhlayiya.
Ukuxhumana akukhona ukukhuluma nomuntu kuphela. Ziningi izindlela zokuxhumana. Abantu ababili bangahlala phansi babheke omunye komunye bakhulumisane ngokuxhumana. Okunye kwezindlela zokuxhumana ukuthintana. Ungaliphulula ikati bese ikati liyafuthumala. Uyaxhumana wena nekati. Ungalula isandla bese uxhawula isandla somuntu futhi uxhumana naye. E-France, e-Italy nase-Spain abantu bavame ukusingathana uma bebingelelana. Bayathintana futhi lokho kuthintana ukuxhumana.
Ngenkathi kubalulekile ukuqonda ngayinye yalezi zingxenye ezintathu ezihlukene, zinobudlelwano thizeni obuqondile kakhulu komunye nomunye bokuthi lapho buhlangene bungeza ukuqonda okukhulu noma okuncane kwabantu, izinto nokuphila uqobo. Lesi isihloko sesifundo esilandelayo.